April 18, 2021Featured
Waxaa la ogaa in Madaxweynayaashii hore oo hoggaamiya Midowga Musharixiinta ay Farmajo isugu yimaadeen aaskii Cali Mahdi Maxamed, laakiin isaga oo aan salaanta ka qaadin uu dib u laabtey.
18 Febaraayo waxa uu Madaxweynayaashii hore ku xabadeyey Hotelkii ay deganaayeen oo uu ku go’doomiyey, iyada oo Xassan Sheekh Maxamuud sheegay in ay ahayd dil ay ka badbaadeen, halka 19 Febaraayo uu xabbad la dhacay dadkii mudaaharaadaayey oo ay kamid ahaayeen raysalwasaarihii hore oo hadda kamid ah Musharixiinta.
Wuxuu Farmaajo diidey dalabayadii Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland ee ah in talada wax laga siiyo Midowga Musharixiinta ee u hadda doonaayo la kulmo.
Intaas oo arrimood oo taagan, ayuu ALBAABKII wada hadalka si toos ah u xirey isaga oo dalabdey in muddo laba sano ah mudada loogu daro, taas oo qaraar ku soo saareen mid kamid ah labadii Aqal ee doortey, Golaha Shacabka ee muddo xileedku ka dhamaadey, taas oo dab iyo baasiin qabad siisey xaaladda dalka una jiheysey waddo mugdi ah.
In uu waxba kama jiraan ka soo qaado qararaarkii Baarlamaanka, taasna waxa uu u baahan yahay in uu helo sabab iyo wax uu wejigabaxa isaga dhaqo (face saving)
In uu is casilo una daneeyo mustaqbalkiisa siyaasadeed, si dalka doorasho degdeg ah loogu jihooyo.
Wixii intaas ka soo harey waa in uu dalka dib ugu celiyaa wadadii dagaalka, qaxa iyo rafaadka lahayd ee isagu aanu markhaantiga ka ahayn, wixii dhacay keliya in uu ka daawado shaashadaha caalamka maahee.